Waddaniga Dadkiisu u Tirsan – Maandoon
Waddaniga Dadkiisu u Tirsan
May 10, 2018 Cali Cabdigiir
Sawirka kore waa 19 jir Ameerikaan ah oo lagu diley dagaalkii 2aad ee dunida, 73 dabshid ka hor—oo lafihiisa hadda la soo helay, kolkaasna si maammuusan loo xabaalay. Innaka oo barbar dhigaynna, 26 dabshid ka hor, bishii 1aad ee 1993, Hagerysa waxaa dhagax lagu diley 5 hablood oo Soomaaliyeed.
www.maandoon.com waxaa ku jirta qormo ah: Hab-fikirkeenna iyo Waayaha Cusub,” Ibraahim Yuusuf (Hawd). Fadlan eeg doodda Soomaalida maanta u taal.
Waa koonkan iyo gadihiisa e’, horraanta bishii 1aa ee 1993, magaalada Hargeysa, 5 hablood baa lagu eedeeyey in ay la seexdeen niman aan meher ugu xirnayn. Waxaa xiray niman wadaaddo sheeganayey. Madal ay ugu yeereen garsoor diimeed (Maxkamad) bay geeyeen. In dhagax qudha looga qabto baa lagu xukumay. Inta la xabaalay baa madaxyada bes laga soo jeediyey, dabadeedna si rafaad badan dhagax loogu diley.
Maalinta gabdhahaas dhagax-dilka lagu silciyey aad uma sugna, balse www.sahirtory.org(South Africa History) sidan buu u dhigay:
“Thursday, January 14, 1993, 5 women who were accused and convicted of adultery, in Hargeysa, Somalia, were publicly stoned to death by cheerful villagers. UN people were present and tried to intervene but they could not help and feared for themselves.” Hadalkaas oo marka la Soomaaliyeeyo noqonaya: “Khamiis, Jannaayo 14, 1993, Hargeysa, iyada oo bulshada qaarkeed u guuxaysay, waxaa dhagxin lagu diley shan hablood, kaddib markii lagu eedeeyey laguna xukumay gogoldhaaf, ama la-seexasho niman aan qabin. Dad Qarammada Midoobay ka socdey baa damcay in ay badbaadshaan, balse dheg jalaq looma siin qudhoodii bayna ku tuugsadeen.
In kasta oo mareegta www.sahistory.org(South Africa History) dharaarta dhacdada ku sheegayo “Thursday, January 14, 1993,” haddana maalinta saxariirta dilka ah dhacay bir kuma jarna. Balse, dhagax-ku-dilku in uu dhacay 1aad, 1993 waxaa kale oo isku raacsan Amnesty International, Country Reports, Middle East Report Mar.-Apr. 1993, 42 iyo Axmed Ibraahim Cawaale oo qormo ka sameeyey dhowr dabshid ka hor.
Haddana, intaas in looga haro gar ma aha namana qabato. Waa in haddaba dhallinta gudaha Soomaalilaandi ku dhaqan baaritaan hor leh u dhaqaaqaan. Magacyadoodii, filkoodii, xigaaladoodii iyo sidii wax u dhaceen, iyo sooyaalka kale oo la halmaalaba waxa ay mudan yihiin uruurin.
Mar kasta iyo meel kasta waxaa jooga indheergarad dalka iyo dadkaba jecel. Markii silcinta qurgooyada ah dhacday,waxgarad bulshada ka tirsan, hay’ado Samofal iyo xubno Qarammada Midoobay deegaanka ka joogay baa xogtii koonka u gudbiyey. Dareenkii qaylodhaantii dunida kale ka soo laabatay awgeed, maammulkii SNM, xoogaa dhaqdhaqaaq ah buu sameeyay. Hase ahaatee, nimankii ka dambeeyey dhagax-ku-dilkii gabdhaha oo maammulkii malaha qabqabtay waa la iska siidaayey—halka, weliba kii abaabulka guud lahaauu dalkaba ka cararay.Baaritaan kolkii aan samaynnay, bulshadu si wada jirsan, amaba ku habboon marna uga ma gilgilan gaboodfalka—halka sida aan soo tibaaxnay in badanna daawanaysay.
In Northern Somalia (Somaliland), the interim group leading the self-proclaimed Republic of Somaliland, the Somali National Movement (SNM), was said to have adopted Sharia law, although the implications of this move were unknown (Country Reports 1992 1993, 236). According to an Amnesty International report of early 1993, however, the SNM enforced Islamic law and women were “whipped for contravening strict Islamic clothing rules, for selling alcohol and for sexual offenses” (Amnesty International 30 Apr. 1993, 6). In early January 1993 in Hargeisa, Northern Somalia, five women were reportedly stoned to death for adultery or prostitution (Middle East Report Mar.-Apr. 1993, 42). Arrested by an Islamic group, the women were taken into police custody and tried by an informal religious court at which they had no legal representation or right of appeal. Convicted under Islamic provisions, the women were buried in holes up to their necks and stoned to death by the group that arrested them. While no officials intervened at the time, the SNM later arrested those involved in the stoning. Amnesty International reports that there was some popular support for the release of the arrested religious leaders (Amnesty International 30 Apr. 1993, 6).
SNM kolkii ay la wareegtay maammulka gobollada Waqooyi, waxa uu ka dhawaajiyey ku-dhaqanka shareecada Islaamka [Amnesty International 30 Apr. 1993, 6]. Waxaa la sheegayaa in marar haween lagu karbaashi jirey qaabka dhar-qaadashada, iibinta Khamrada iyo gogoldhaafyada.
Sida laga soo xigtay (Middle East Report Mar.-Apr. 1993, 42), bilowgii 1aad 1993, magaalada Hargeysa, Shan haween ah baa lagu eedeeyey in ay la seexdeen ama jacayl la sameeyeen niman aysan xaasas u ahayn—amaba,in kasta oo aan ka afeefanaynno dhihidda erayga “Dhillaysi,”haddii si qayaxan loo yiraahdo,habluhu waa dhillaysteen.
Gabdhahaas inta la qabtay baa loo taxaabay saldhig boolisoo magaalada Hargeysa ku yiil ama weli ku yaal kobtiisii. Dabadeed, waxaa la saaray maxkamad aan haba yaraatee ku salaysnayn shareecada Islaamka–ee ahayd mid dhowr wadaad kuraas dhigteen kolkaasna ugu yeereen garsoor, ama maxkamad Islaami ah.
Maxkamad-diimeedkii la geeyey hablaha waxa ay ku xukuntay dil. Inta la xabaalay baa madaxyadii laga soo jeedshay kolkaasna lagu tumay dhagxuun ilaa ruuxyadii daayeen. Sida wararku sheegayaan, markii hablaha dhagaxa lagu dilayey, maammulkii SNM cidna kama joogin goobta, ama ma faro gelin. Hay’ado Samofal iyo dad-iyo-dad-jeclayaal Soomaaliyeed baa gaboodfalkii baahiyey. Cabashadaas iyo baahintaas kaddib, maammulkii SNM waxa uu ayaamo kaddib xiray wadaaddadii saxariirta ka dambeeyey. Amnesty International waxa ay werinaysaa in shacabkii fagaaraha joogay badanki uu u riyaaqsanaa silcinta.
waxaa hubanti laga dhigayaa in odayaal iyo wadaaddo iskaashaday ay maammulkii SNM ku cadaadiyeen in la sii daayo nimankii abaabuulkii dhagax-ku-dilka loo soo qabtay.
Kolka nin la diley 73 dabshid ka hor lafihiisa maammuus lagu duugayo, bulsho ahaan sidee u qaadan karnaa dhowr in ay go’aan ka gaarto jiritaanka 5 hablood? Guud ahaan, dal waxa dhisa ama dumiya dhallintiisa. “Asaaggaa ka har” waa habaar aanan u quurin dhallinta Soomaaliyeed, haddana, dhaliishu bannaanka bay taal.
Dhallinta jaamacadaha ku jirta ee jecel in ay raacdo xeerarka caalamiga ah, Arrimaha bulshada, deegaanka iyo laamaha kale ee aqooneedba, iyo baareyaasha kalebawaxa ay xogo badan ka heli karaan meelaha aan soo taabannay.Haddana, xogta ay ku siinayaan ilahaasi waxa ay ku xiran yihiin qaabka aad u abbaarto, halka aad ka soo jeeddo, sida jaamacad ama dawlad, iyo sooyaalka baaritaan ahaaneed ee aad muujiso.
Ugu dambaynta, 3 xusuusood baan idinku dhaafaynnaa. Nin baa nin kale ka codsaday in uu marag been ah u furo. Ninkii waa furay maraggii beenta ahaa. Ninkii maragga beenta ah loo furay baa maalin kale arkay kii maragga beenta ah u furay, oo la oran jirey Jucfe, oo nin wanaagsan qolo isaga dhigaya. Kolkaas buu ku yiri, “Jucfow Eebbe ku og anna ku ogi”.
Waxaa isna jirey nin la oran jirey Elman Axmed Cali. Waxa uu ku noolaa Xamar kolkii dagaalka sokeeye ugu xumaa. Waxa uu u halgami jirey in dhallinta uu hubka ka dhigo. Elman, 3aad, 1995 baa Xamar lagu diley. Waxa uu nooga tegey guubaabada halkudhigga noqotay. Waa: Qoriga dhig qalinka qaad. Haddana, Oktoobar 11, 1985 [Washington Post], madaxweynihii hore ee Maraykanka, Ronald Reagan, isaga oo ula jeeday dad gaf-ma-galabsato Ameerikaan ah diley, oo cararay dabadeedna la soo qabtay, waxa uu isna ka tegey: Waa aad carari kartaan mase dhuuman kartaan (You can run but you can not hide).
Haddaba, awood aad mar haysato kolka aad si gurracan ugu fuliso kuwo tabar yar, Biri-Ma-Geydo iyo gaf-ma-galabsato, ogsoonow in qalinku jirayo qarniyaal—isla markaasna ay jiraan in badan oo aan qalinkooda la cabburin karin. Carar oo meesha aad isleedahay waad ku dhuuman kartaa tag, balse Eebbe ku og. Waxaa kale oo ku og xigaaladii iyo saaxiibbadii gabdhaha, iyo dal-iyo-dad-jeclayaal Soomaaliyeed, iyo cid kasta oo gardarrada neceb waxna diiwaanisa.
Cali M. Cabdigiir (Caliganay)
← Gudniinka Fircooniga iyo Guurinta Gabdhaha Yaryar; Gef iyo Gaboodfal
Ustaad Maxamuud Maxamed Taha iyo sixidda fikirka Islaamka (2/3) →
February 11, 2019 Cabdicasiis Guudcadde Comments Off on Diinta iyo Saamaynta Dhaqanka
Aqoonta iyo khuraafaadka
March 28, 2017 Maxamed Aadan Ciiraale 0